Ihe Ndebanye aha Omume | Martech Zone
Laa azụ na oge opupu ihe ubi, e nwere ihe ịtụnanya, nke dị ịtụnanya, ihe ịtụnanya nke akwadoro nzukọ dị egwu akpọrọ Express Employment Professionals. Usoro ihe omume ahụ n'onwe ya bụ usoro okwu dị egwu, gụnyere Indy nke Peyton Manning. Ndị ọrụ ahụ mere ihe omume ahụ n'enweghị ntụpọ ma echere m na igwe mmadụ ahụ masịrị ya nke ukwuu. N'ezie, enwere m naanị otu mkpesa - ọ nweghị ihe jikọrọ ya na ụbọchị mmemme ahụ.
O di nwute, mkpesa ahụ bụ doozy. Ihe omume a nwere ahụmahụ ndebanye aha dị egwu. Debe oche gị, nke a ga-abụ ogologo njem.
Amaara m na ọ ga-adị njọ site na mbido, ya mere, enwetara m ihuenyo ole na ole. Lee ka o siri bido.
Nkwupụta Email ahụ
Otu ụbọchị, enwetara m ozi a na igbe mbata m. Were gander ma sonyere m mgbe ihe oyiyi ahụ gasịrị:
Agam ekweta, nke a abughi ozi ojoo. Oku a na-akpọ ime ihe nwere ike ịbụ obere ihu ala, mana ọ bụ ebe ahụ n'atụghị egwu, akwụkwọ ozi edepụtara n'okpuru: Rịọ tiketi gị taa. Ọbụna ha gụnyere URL maka ibe ndebanye aha ahụ kpọmkwem n'ime email ahụ. Nke ahụ dị mma, n'ihi na ọ bụrụ na m na-agụ ihe a na ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ na mmadụ ebipụtaala email ahụ, m ka nwere ike “pịa” njikọ ahụ site na idegharị ya!
Ya mere, ebee ka njikọ ahụ gara? Ọ gara…
Ebu m ụzọ gafee ebe m si enweta ọdịda. Ọ dị mma, pịa ọzọ dị ntakịrị, mana nke a adịghị njọ. Agụghị m peeji a, naanị m pịa nnukwu bọtịnụ… nke dugara m…
Akwụkwọ Mbata Na-Emebata
N'oge a, ebugharịrị m ọzọ na ibe weebụ ọzọ, nke nwere ozi ozi. Nke a bụ oge, nke a bụ ọnọdụ adreesị, maapụ, ụzọ ịkwọ ụgbọala, njikọta mmekọrịta mmadụ na Express. Lelee onwe gị anya:
Mana n'ezie, ọ nweghị nke ọ bụla dị mkpa ugbu a. Achọrọ m "ịrịọ tiketi" tupu m eche banyere nkọwa ndị a niile. Kpọmkwem ụgbọala ụzọ na ọnọdụ adịghị mkpa ruo mgbe m nwere tiketi.
Agaghị m aga na ibe LinkedIn gị ma ọ bụ soro gị na Twitter ugbu a. Enwere m ihe mgbaru ọsọ n'uche: denye aha maka ihe omume gị! Anyị nwere ike ikwu maka itinye aka na mgbasa ozi mmekọrịta mgbe Enwetara m tiketi m. Ka emechara, na-adịghị a zillion ọzọ Peyton Manning Fans na-agbalị iji nweta tiketi na otu oge?
Ọ dị mma, pịa bọtịnụ, nke na-eduga m n'ụdị a maara nke ọma called
Ojiji Ndebanye aha Ochie
Ee, nke ahụ bụ m na-aza ajụjụ. I nwere ike icheta na m nwere mmasị na echiche nke otu-pịa omume ndebanye. Echere m na ọ juru m anya na ahịa email nke klas ụwa sitere na ExactTarget (hụrụ unu n'anya!) . Ma ọ dịkarịa ala, ị maara adreesị email m!
Ka osi na dị, emechaala m. (Oops, ọ fọrọ nke nta ka kụrụ "kagbuo" ebe ọ bụ na ọ dị nso.) Sị, a sị na Jakob Nielsen chọpụtara ndị a dị ka echiche jọgburu onwe ya ihe karịrị afọ iri gara aga. Agbanyeghị…)
The N'ezie Ndebanye aha Page, Wee
Mana o doro anya, otu ndebanye ndebanye ezughị. Anyị chọrọ ibe nke abụọ maka ụfọdụ ihe kpatara ya.
Ma eleghị anya ọ bụrụ na ndị mmadụ ahapụ ụdị ahụ ozugbo ha rutere na nke a? Ọ bụghị dị ka a ga - asị na ụdị ahụ na - eme nkwado ọ bụla. Ee, m gbalịrị itinye koodu zip nke nwere mkpụrụedemede niile na akara ekwentị mebere. M pịrị “Zọpụta na-esote” (M na-aga “Zọpụta” ọrụ m, ma ọ bụghị na ọtụtụ ọrụ.) Nke a na-eduga m…
Na-akwado na Want Chọrọ ịdebanye Page
Ee, n’ezie m pịnyere ihe n’ụzọ ziri ezi! Nke ahụ bụ ihe peeji a na-ekwu ma chọọ ka m pịa ọzọ.
Ugbu a, anyị kwesịrị ime. N'ikpeazụ! Yabụ ugbu a ọ bụ maka
Nkwenye ndebanye aha nke abụghị nkwenye
Na nnukwu akwụkwọ ozi na taabụ isiokwu ya kwuru “Nkwenye.” Mana ọ bụrụ n'ịgụ ederede ahụ, nke m fụrụ maka gị na mkpuchi ihu n'okpuru, ị ga-ahụ na n'eziokwu na nke a abụghị n'ezie nkwenye. N'ezie, ugbu a ọ dị ka ohere "ịrịọ tiketi" bụ n'ezie ohere "ịrịọ ohere ka ị bụrụ atụle maka tiketi. ”
Mara: Emechara m gwa ụfọdụ ndị okwu okwu na ndị ọrụ Express, usoro a nwere ezi uche na nlọghachi. Ha choro ịkwalite ihe omume a na ndị na-ege ntị, mana ha chọkwara ịnwale ma hụ na ndị ahịa na atụmanya kachasị amasị ha bụ ndị mbụ. Agwara m ha na n'echiche m asụsụ dị na email na nkwalite ahụ apụtaghị ụdị nhọrọ ọ bụla, yana ọ dị m ka ọ dị m n'iyi nkeji ise nke oge m. Echere m na ọ ga-abụ na ha mere mkpebi mkpebi amamihe dị na ya gbasara ịhọrọ ndị bịara ga-adị mma maka azụmaahịa ha, mana abụghị m onye na-akwado okwu ndị mere ka m bịa ebe a.
Ugbu a, usoro ndebanye aha a ka na-adị m mma. Ọbụghị naanị na o meela ka m pịa site na ọkara ihu iri na abụọ wee kwe ka m nye ọtụtụ ozi adịgboroja, o doro anya na ọ nweghị ikike iji chọpụta ụbọchị dị ugbu a. Ọ bụrụ na ọ mere, agaghị m achọ ka m leba anya na kalenda nke m iji mata ma ọ dị ugbu a tupu ma ọ bụ mgbe Eprel 15. Usoro ahụ ga-enwe ike igosipụta ozi ziri ezi!
Ka osila dị, emechaala m. Amụ na m ga-eche rue Mee 2 ịnụ ma m nwetara tiketi. Ma chere, enwere…
Email Nkwenye Na m Ga-azọpụta
N'ezie usoro ndebanye aha a maara onye m bụ. Ma ekwesịrị m ịchekwa email maka tiketi efu? O doro anya na m bụ naanị onye nwere adreesị ozi-e a.
Ma n'ezie usoro ndebanye aha a nwere ike ịgụ. Nkebi ahịrịokwu ahụ "nnweta tiketi" na-egosi na sistemu ahụ enweghị ike ịdekọ ọnụ ọgụgụ oche ndị ekenyelarị!
Email ahụ di ịtụnanya
N’April 22, enwetara m ozi email ọzọ. Echere m na m ga-amụta ma ọ bụrụ na m ga-enweta tiketi. Kama nke ahụ, enwetara m ihe dị mgbagwoju anya:
N'oge a, echeghị m ihe na-eme. A sị na m “họpụtara” ịga jiri tiketi mgbe niile, wee nwee ohere ịbanye n'asọmpi a? Mpụta nke bọtịnụ “Arịrịọ Tiketi” dị na ala bụkwa ihe na-akụda mmụọ. Nke a dugara n'otu ụdị ahụ m mechara. Yabụ ikekwe edebanyere aha m na mbụ m? O doro anya na ha zigara nke a na otu adreesị ozi-e, dị ka egosiri n'okpuru.
Ekpebiri m ịhapụ nke ọma naanị m. Ọzọkwa…
Ekele nnabata Email ahụ
Na Mee 4, enwetara m ozi email a. Ọ dị ka nke ọma na mbụ, mana mgbe ahụ achọpụtara m na m nọ!
Aghọtaghị m ihe kpatara ha ji chọọ ịbịa n'ọfịs m inye m tiketi. Enwere m ike ịdepụta email. Onwere onye tufuru ha n’onu uzo, ma onweghi onye no ebe a n’oge ahu ya mere echere m na onwere oge igha njem.
Apụghị m ịgwa gị otú oké ihe ahụ merenụ bụ na May 18. Zuru oke n'ụzọ niile. Okwu dị egwu. Nnukwu ogbugbu. Ebe mgbakọ mara mma. Ezigbo nri ma na-agbanye ume. Mana ndu ahụ jọgburu onwe ya, ọkachasị na-echebara aha ụlọ ọrụ ụwa nke ụlọ ọrụ abụọ ahụ metụtara aha ndebanye aha. Kedu ihe mere?
Echere m na ExactTarget na Cvent bụ naanị nyiwe, ị nwere ike iji ha mee ihe dịka ị nwere ike iji teknụzụ ọ bụla ọzọ eme ihe. Echere m na enwere ike nwee nsogbu nhazi na ịtọlite ​​usoro ndebanye aha na otu ndị mere nke a emeghị ka ọrụ ha nwere iji chepụta ahụ ndebanye aha. Ozi ahụ kwesịrị doro anya, agbanyeghị: nnukwu ihe kwesịrị ịnwe ndebanye aha mmemme dị mfe, dị mfe iji. Nke ahụ bụ akụkụ nke ahịa gị! Ọtụtụ mmadụ ga-arụkwu ọrụ na ahụmịhe ahụ ma ọ bụrụ na ọ dị mfe ịdebanye aha, ọ dị mfe ịga, ma dịkwa mfe ịghọta ihe ị na-enye.
Otu a ka m siri kwusi.
Dee 7, 2011 na 9: 52 AM
Ihe omume a nwere ike ịbụ ihe ịtụnanya, mana enweghi obi abụọ n’echiche na ha tufuru ọtụtụ ndị edebanyere aha ha n’ụzọ ahụ n’ihi usoro ndakpọ olileanya na nke ịkwa emo. Agaghị m enye ha njem - n'agbanyeghị ụlọ ọrụ ha na usoro ahụ. Ihe ha na-ekwu bụ na ọ dabara na "ha"… ọ bụghị na ọ pụtara na "ị". Na "gị" kwesịrị ịdị mkpa karịa "ha".
Dee 7, 2011 na 10: 21 AM
Na-ama jijiji. Ihe dị ka nke ahụ gaara eme ka m ghara ịchọrọ tiketi naanị na ụkpụrụ nke ihe ahụ. Ma ọ bụrụ na ha dị njikere inyefe m tiketi ahụ, m ga-enwe obi ụtọ inye ha ntụziaka. Nke mbụ, ha ga-abanye n'ụgbọala, ma malite ịkwọ ụgbọala. Aga m agwa ha ụzọ ha gachara ma ha gbaa kilomita iri na abụọ.